मन्त्रीले आफ्नै ड्राईभरलाई ठगेको आरोप, मन्त्रीको लाईभ जवाफ, ल्यावको गल्तीले झण्डै गयो ज्यान ! (भिडियोसहित) | NewsSudur
मन्त्रीले आफ्नै ड्राईभरलाई ठगेको आरोप, मन्त्रीको लाईभ जवाफ, ल्यावको गल्तीले झण्डै गयो ज्यान ! (भिडियोसहित)
काठमान्डौ – २०६७ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा नेकपा मालेका तर्फबाट संस्कृत तथा पर्यटन मन्त्री भएका खगेन्द्र प्रसाईको गाडी चलाउने परियारलाई किर्ते जग्गा बेचेर मन्त्रीले नै ठगेका हुन् । १० बर्षसम्म साउदी अरेबीयमा पसिना बगाएर स्वेदश फर्किएका दुर्गा परियारले संयोगबश उनै मन्त्रीको गाडी चलाउने काम पाए । इही दौरानमा पुर्व मन्त्री प्रसाईले दुर्गालाई भएको पैसा जग्गामा लगानी गर्न लगाएर आफ्नै जग्गा दिने आशा देखाए मन्त्री जस्तो व्यक्तिले सस्तोमा आफ्नै जग्गा मिलाइदिने भनेपछि दुर्गा परियार पनि चुपचाप जग्गा किन्न पुगे । भतपुर सिपडोल स्थीत चल्तीमा प्रति आना ४ लाख पर्ने जग्गा परियारलाई २ लाखमा दिने भन्दै ४ आना जग्गाको कागज बनाए ।
बसन्त स्याङतानको जग्गा भएको भन्दै एक महिनापछि जग्गा पास गरिदिने भन्दै उनले तत्कालै साढे २ लाखको कागज बनाए भने थप साढे २ लाख ऋण स्वरुप मन्त्री प्रसाइले लिए । त्यसपछि महिना बिते, बर्ष पनि बिते तर मन्त्रीले उनको जग्गा पास गरिदिएनन् । पछि मालपोतमा गएर हेर्दा उनले किनेको भनिएको जग्गा किर्ते रहेछ । बसन्त स्याङतानको भनिएको जग्गा त धर्मरत्न शाक्य र श्यामरत्न शाक्यको रहेछ ।आँफु मन्त्रीबाटै ठगीएको थाहा पाएपछि उनले अदालतमा मुद्वा पनि हाले । ठगीको केस चलेपछि पुर्व मन्त्री प्रसाई २४ दिन हनुमान ढोकाको जेलमा पनि बसे ।
तर पछि अदालतले धरौटीमा छाडिदियो । उनको पैसा अन्य २ व्यक्तिले भुतmानी गर्नुपर्ने भनि फैसला भयो । भुक्तानी गर्नुपर्ने भनिएको बसन्त स्याङतान श्यामकाजी स्याङतानलाई उनले राम्रोसँग भेटेका पनि छैनन् ।अहिले पनि खानेपानी मन्त्रालयको गाडी चलाउँदै आएका उनलाई परिवार पाल्न मुस्कील छ । रगत पसिना बगाएर बिदेशमा कमाएको पैसा पुर्व मन्त्रीले नै ठगे पछि अहिले छोराछोरी बिरामी पर्दा समेत उपचार गर्न समस्या पर्छ दुर्गा परियारलाई । अहिले पनि समयमा समयमा पुर्व मन्त्रीलाई उनले सम्पर्क गर्दा काठमाडौ आएर मिलाइदिने बताउँछन् । तर ७ बर्ष भईसक्यो उनि भने कहिलै आएन्न । हाम्रै कार्यालयमा बसेर फोन गर्दापनि मन्त्रीले आँफु काठमाडौ आएर मिलाउने भन्दै टारे ।